Somaliland: Xildhibaan Wasiirro Xukuumadda Ka Tirsan Ku Eedeeyey In Ay Gaadhi Jiidhsiiyeen Saddex Qof Oo Ay Dhaawacyo Culus U Gaysteen - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xildhibaan Wasiirro Xukuumadda Ka Tirsan Ku Eedeeyey In Ay Gaadhi...
“Cukuse Waa Ninkii Iigu Dhaartay In Uu Ciidan Iyo Cagaf Gelinayo Dadka DeegaankaQoolcaday, Wuxuu Warfaafinta Ka Soo Sameeyey Ayuu X/Xoolaha Ka Samaynayaa”..Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin (Cabdiraxmaan Dheere)
“Madaxweyne Wasiirradaadu Waa Kuwo Aan Kalsooni Ka Haysan Umaddooda Waxna U Sheegi Karin, Cukusena Waa Qayrul Masuul Cuqdadi Dishay Oo Aan Kalsooni Lahayn”………. Xil. C/Dheere
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin (Cabdiraxmaan Dheere) oo ka mid ah Xildhibaanada Xisbiga KULMIYE ugu jira Golaha Wakiilada Somaliland ayaa wasiiro xukuumadda ka tirsan ku eedeeyey in ay dad masaakiin ah oo ka tirsan deegaanka Qool caday jiidhsiiyeen baabuur oo ay saddex ka mid ahi dhaawacyo qabaan isaga oo Wasiirka Xanaanada Xoolaha Somaliland Cabdilaahi Cukuse ku eedeeyey in uu dhibaato ka dhex wado shacabka deegaanka Qoolcaday arrinta la xidhiidha banka deegaankaasi. Xildhibaan Caalin oo shalay warbaahinta ugu warramay Hargeysa waxa uu Madaxweynaha Somaliland ugu baaqay in uu ka qabto Wasiir Cabdilaahi Cukuse oo uu ku eedeeyey in uu dhibaato ku hayo dadka deegaanka uu ka soo jeedo isaga oo buu yidhi aan wax kalsooni ah ka haysan shacabkaasi.
Xildhibaan Caalin waxa uu yidhi: “Arrinta aan doonayo in aan maanta ka hadlo oo aan in muddo ah ka warwareegayey waa arrinta ka socota Banka Qoolcaday oo uu si aad iyo aad u qaab daran oo fool xun uu u maamulayo ninka imika Wasaaradda la keenay (Cabdilaahi Cukuse) iyo dad kale oo badan oo uu wato oo aynaan garanayn meel Alla meel uu ka soo ururiyey. Hore waxa heshiis loogu ahaa oo daawladdu hore ugu wada hadashay oo la isla gaadhay haddoo arrinkaa la gudo galo in ay dadka deegaanka noqdaan cidda lagala hadlayaa. Waxa heshiis lagu ahaa in dadka deegaanka uun lagaal hadlo arrinkaasi. May ahayn wax qorshaha ku jiray in dadka Hargeysa laga ururiyo oo lacag lagu siiyo arrinka Banka Qool Caday. Darraad ayaa la yidhi waxa Workshop lagu qabnayaa deegaankaasi waxaana la geeyey laba qolo. Qolo odayaal iyo dhallinyaro u badan oo Hargeysa laga qaaday inta lacag la siiyey iyo qolo degan deegaanka Qool-caday oo ah dad tuulada maqaaxiyo ku haysta. Dadkii deegaanka joogay wax allaala wax laga ogaysiiyey ma jirto. Taasi mid bay ahayd. Shalayna (Dorraad) qolo kale ayaa loo diray Qool Caday. Dadka waxa lagu yidhi Sallaxley isugu taga halkaasaa shir lagu leeyahee. Shaw niman Wasiirro ah ayaa halkan gawaadhi ka kaxaystay oo sii kaxaysanayay odayaal iyo dad masaakiin ah oo ay siiyeen Konton Konton iyo Labaatan labaatan dollar. Nin gaal ah oo Michael la yidhaa oo ka socda Hay’adda DANIDA ayaa isna la kaxeeyey. Dadkii deegaankaasi waxay ku yidhaahdeen Sallaxley taga. Waxaanay gaalkii geeyeen deegaankii Qool-caday oo aan cidi joogin oo ay ku yidhaahdeen dadkii hawshii way dhammaatay. Dadkii oo Sallaxlay jooga ayaa maqlay in Cukuse iyo ciidankiisii ay joogaan Bankii kadibna baabuur ayay soo raaceen. Waa la isku dhici gaadhay oo saddex qof ayaa imika dhaawac ah oo baabuurtii wasiirradu jiidheen oo jajaban. Qaarbaa feedhuhu jaban yihiin, waxa jiidhay Cukuse iyo Cali Wadaad”.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin (Cabdiraxmaan Dheere) oo arrimahaasi ka sii hadlayaa waxa uu yidhi: “Waxaan doonaynaa in aannu Madaxweynaha u sheegno in arrinkaasi loo wado si qayrul masuulnimo ah. Madaxweyne wasiirradaadii waxa ay ka baqayaan in ay dadkii dhex fadhiistaan oo u tagaan oo u warramaan. Kalsooni kuma haystaan dadka. Haddii Cabdilaahi Cukuse doonayo in uu Madaxweynaha ku yidhaa hawshii Qool Caday waan soo dhammeeyey waxaanu leenahay waxba Madaxweyne may dhammaan. Qas iyo buuq buu meeshii ka dhex abuuray. Si xun oo cuqdadi ka jirto ayuu u socdaa oo kalsooni darro badan ayaa ka muuqata. Wixii uu Wasaaradda Warfaafinta ka soo sameeyey buu doonayaa in uu tanna ka soo sameeyo. Laga aqbali maayeen Madaxweyne yaannu sumcadda kaa xumaynin. Wasiirku nin wax akhriya maaha nin wax kala garanaya maaha. Hay’addu waxa aanu ku nidhi dadka dhagaysta oo dantooda u sheega. Annagu waanu kula shaqaynaynaa mudada xilkaaga kaaga hadhay balse wasiiradaadu maaha qaar dadkooda ku xidhan. Cabdilaahi Cukuse maalintii xilka Wasaaradda Warfaafinta laga soo badalay ee la keenay Xanaanada xoolaha waxa uu iigu dhaartay aniga oo aan markhaatigeedii hayaa in uu ciidan RRU ah iyo cagaf uu kaxaysanayo oo uu galayo dadka deegaanka Qool Caday degan. Wallaahi, in aanan been ka sheegayn. Markhaatigeedii wuu joogaa Cismaan Baane ayaa la yidhaa waxaanu ka mid yahay Guddida beesha Ciidagale. Goob joog buu ka ahaa. Shalay baanu qaar kala gaadhnay oo uu isku dhufan gaadhay. Ninkaasi (Cukuse) dadkuu isku dhufanayaa. Arrintii tiyaatarka ayaad ogaydeen buuquu ka abuuray. Tii buu u wareejiyey xaggaa. Talo ma ogola. Waa saaxiibkay balse sida uu u dhaqmo waxaad mooddaa ciyaalo suuq. Qof deggan maaha” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.
Somaliland: Wasaarada Waxbarashada iyo Sayniska oo Daahfurtay Barnaamij Aqooneed Cusub